I-Bridport Villa Mary, Ukubukwa kwamanzi, i-Balcony BBQ - I-Airbnb
I-Bridport Villa Mary, Ukubukwa kwamanzi, i-Balcony BBQ
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Donna
I-Villa Yangasese Yesimanje ene-balcony ene-Bbq nokubukeka okuhle kolwandle. Ingadi ephephile ne-carport. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kukho konke okufunayo eholidini. Uma isimo sezulu siba sibi khona-ke sinikeze imidlalo eminingi efana ne-scrabble, amakhadi, i-monopoly smart TV, izincwadi nekhishi elinakho konke uma uzizwa sengathi upheka, ezinye izinto ezitholakalayo ukuze zisetshenziswe.
I-villa yangasese enamakamelo okulala angu-2, eyi-1 kwangu-2 endaweni yokuvimba. I-villa inengadi ephephile ephephile enendawo yokudlala yezingane futhi kungenzeka inja encane ingajabulela isikhathi lapha futhi. Ukubukwa okuhle kusuka kuvulande wolwandle nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya emgwaqweni ophakeme onezitolo eziningi zokudla nezitolo zezingubo zokugqoka kanye namamakethe ambalwa amancane nesitolo sebhodlela. I-ramp yesikebhe nenkundla yokudlala futhi eqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo.
4.80 · 125 okushiwo abanye
Ama-Neibours anobungane kakhulu futhi aziqhenya kakhulu ngengadi. Siyayithanda le villa yeholide ngoba inezindawo ezinhle zokubukwa kanye nendawo kanye nokufinyelela okulula kwezikebhe, amabhishi, izindawo zokudlela, ukuthenga kanye nepaki lokudlala kwenza kube lula ngeholide eliseceleni kolwandle.
Ngicela ungithumele i-imeyili uma ungathanda ukwazi noma yini noma uma unezinkinga.. sifuna ukuthi ube neholide elihle futhi uma singathuthukisa noma yini esizoyithuthukisa.